Toerana tsara indrindra mba Hihaona amin'ny Vehivavy ao Seoul - Korea Mampiaraka Soso-kevitra
Toerana tsara indrindra mba Hihaona amin’ny Vehivavy ao Seoul — Korea Mampiaraka Soso-kevitra
Nanapa-kevitra momba ny toerana tsara indrindra mba hihaona vehivavy ao Seoul miankina amin’ny inona no karazana vehivavy tsy tianao. Taorian’ny taona maro eto, dia afaka soa aman-tsara ny milaza fa misy andohalambo-karazany ny koreana ny vehivavy ao Seoul. Nanome samy koreana ny vehivavy dia afangaro ireo karazana, fa fantany izay te-hanampy anao hahita ny karazana koreana vehivavy haingana. Ireo no marina amin’ny fiaviana mba hanampy amin’ny fitadiavana ny toerana tsara indrindra mba hihaona amin’ny karazana vehivavy tsy tianao. Mino aho fa izay rehetra manam-paharoa fa ny olombelona fomba fijery ny hafa mba hahatonga ny fiainana ho mora kokoa. Ireo no tsara tarehy koreana vehivavy izay re rehetra atao-ka tahaka ireo nivoaka ny Glamour gazety. Agelong (na Apgar toy Zeolites miantso azy) dia high-end fiantsenana foibe amin’ny entana ny kafe toeram-pivarotana, ny toeram-pivarotana sy ny arabe feno vehivavy tsara tarehy. Fotsiny mankany Agelong Station (eo amin’ny orange tsipika), ary mandeha ny Rodeo fiara. Ianao ll jereo ny antony fahazoan-dalana aho fa ny toerana rehefa mahazo any. Gangnam dia manondro ny faritra manodidina Gangnam station (toy ny ao amin’ny sary). Eny an-dalambe, ny fivarotana kafe sy ny fikambanana ao amin’io faritra io, dia heniky ny andriambavy jereo tiany. Afaka mandray ny metro s tsipika maitso na fiara fitateram-bahoaka fa station conveniently. Rehefa miteny aho hoe mpandala ny nentin-drazana, ny tiako holazaina dia ny mahazatra koreana vehivavy izay efa koreana soatoavina fa malala-tsaina ampy mba hanandrana zava-baovao (tahaka ny zavatra avy amin’ny kolontsaina.) Dia jereo tsara ary tsy t lehibe loatra ho make-up.
Ho ahy manokana, tiako ny fivoriana azy tany an-subways na amin’ny kisendrasendra ny fivarotana kafe. Raha ny tena tsara ny vehivavy dia ilay antsoiko hoe mpandala ny nentin-drazana, dia ao Korea s homogeneous ny fiaraha-monina dia afaka manantena ny hahita mety vita na aiza na aiza. Fa efa nilaza aho hoe fa ny metro sy ny fivarotana kafe dia ny sasany ny toerana tsara indrindra mba hihaona ny vehivavy toy izany. Ankoatra izany, raha tsy azo antoka ny fomba na ny zavatra tokony hatao ianao rehefa mahafeno ny tsara koreana vehivavy, manoro hevitra aho mandraoka ny dika mitovy ny Daty koreana Vehivavy e-boky. Ianao hahazo ny voalohany-tanana toro-hevitra taorian’ny taona maro ny fiainana sy ny mampiaraka ao Korea. Raha tadiavinao ny koreana vehivavy izay zara raha manana traikefa eo amin’ny olona sy ny na izay mihazona mafy ny Kristianina ny soatoavina momba ny ny fiarahana sy ny fifandraisana, dia ireto ny karazana. Ianao ll tena azo inoana fa hahita azy eo amin’ny fiangonana eo an-toerana ny vondrona (sy ny tsy fiangonana.) Mampalahelo anefa fa, tsy t manana traikefa be dia be amin’ny fitadiavana ny toerana tsara indrindra mba hihaona ny vehivavy toy izany dia noho ny nentim-paharazana ny vehivavy dia t ny karazana (araka ny mety afaka maminavina.) Raha te-ho amin’ny koreana vehivavy izay tia ny vahiny sy ny kolontsaina vahiny, avy eo aho fahazoan-dalana handeha na Itaewon (ny vahiny faritra Seoul) na Honda (ny tena malala-tsaina Oniversite faritra Seoul.) Ny vahiny sy ny vahiny tia vehivavy koreana mandehandeha any. Nanome ry zareo aza t mandehana any mba hihaona vahiny fa mihoatra noho ny azo inoana fa ho hanokatra mba handeha eo amin’ny daty ianao.
Afaka mandeha na toerana amin’ny metro na ny fiara fitateram-bahoaka
Misy be dia be ny fivarotana kafe, trano fisotroana sy ny fikambanana misy. Izany no mahatonga ireo roa ny toerana tsara indrindra mba hihaona ny vehivavy izay te-ho any aminao. Amin’ny mpikomy aho hoe ny vehivavy izay efa nitsipaka ny homogeneous kolontsaina. Afaka mamantatra azy ireo fitafiny tena tsy mitovy amin’ny ankamaroan’ny vehivavy (na ny fomba volo dia tena tsy manam-paharoa.) FANAMARIHANA: Hianatra ny fomba hanombohana ny resaka taminy ny fotoana manaraka Haka ny dika mitovy ny Daty farany koreana Vehivavy e-boky. Raha toa ka miaina ao Korea Atsimo, dia misy toerana izay mitovy amin’ny olona aho ve ny voalaza, dia hatao. Indrisy anefa, fa tsy t mahalala zavatra betsaka momba ireo tanàn-dehibe hafa tao Korea. Raha mipetraka any Andrefana na Oseania (na any an-kafa) dia afaka ihany koa ny mahita ny karazana koreana ny vehivavy any amin’ny toerana izay manana izany toetra araka ireo voalaza etsy ambony. Mampalahelo tsy ny rehetra koreana vehivavy izay any ampitan-dranomasina dia misokatra amin’ny kolontsaina vahiny. Ny sasany vao handeha hianatra teny anglisy sy hahazo ny sata izay tonga miaraka amin’ny I. e. miarahaba, anarako no Yannick, aho frantsay aho, miasa ao shina, ary tsy tokony ho tonga ao Seoul avy ny diabe ho an’ny visa.
Tiako ny hihaona koreana zazavavy nandritra ny fitsidihana noho
← Ny Tsara Indrindra Koreana Mampiaraka Toerana - Koreana Ny Fitiavana
Ahoana no hivory hiaraka koreana Mozika →